Manakarama mpisolovava manam-pahaizana amin'ny raharaha famotsiam-bola any UAE | Orinasa Mpampanoa lalàna
Mpanolotsaina manam-pahaizana momba ny tranga fitrandrahana vola any UAE
Ny teny mahazatra ampiasaina amin'ny famaritana ny fomba ampiasain'ny mpandika vola amin'ny serivisy hanaratsy ny loharanom-bola dia ny famotsiam-bola na ny Hawala. Ny vola azo avy amin'ny asa heloka bevava dia miafina mba hahazoana tombom-barotra toa avy amina loharano manankery.
Fandroahana hetra, vola maloto ary fampiharana ny lalàna
tsy ara-dalàna ny famotsiam-bola
hetsika ara-bola amin'ny alàlan'ny andrim-panjakana
Ny toetran'ny vokatra sy serivisy natolotry ny sehatry ny serivisy ara-bola dia manondro ny sehatra tsy hampiasa ny volam-bola. Manerana izao tontolo izao, ny fandikan-dalàna amin'ny fanodinkodinana vola dia manana endri-javatra mitovy amin'izany.
Misy singa roa amin'ny fandikan-dalàna. Izy ireo dia:
Ny hetsika famotsiam-bola ny tenany.
Ary ambaratonga fahalalana na intuition momba ny famatsiam-bola na hetsika ara-bola ataon'ny mpanjifa.
Inona no tanjona hoentina amin'ny famotsiam-bola / Hawala?
Ny famotsiam-bola dia manome lalana ho an'ny mpandika hahazo vola na vola mora nefa tsy miasa azy. Tsy mahazo vola amin'ny fomba ara-dalàna izy io, fa ny meloka dia manalavitra ny fametrahana azy ary manao vola mora foana nefa tsy mandoa hetra.
Ahoana no mitranga any UAE?
Any UAE, ny fanangonam-bola dia dingana iray izay dingana telo miavaka.
Ny dingana voalohany amin'ny dingana dia ny 'fanasana' ny fananana sy ny fananana ary koa ny loharano izay mikendry ny hanafina azy ireo.
Ary ny fampidirana, izay ampidirina indray ny tsena ara-dalàna.
Any UAE, Abu Dhabi, Dubai, ary Sharjah, ny volavolan'ny fandaniam-bola avy amin'ny paikady mora sy saro-pady. Anisan'izy ireo:
firafitra: Tafiditra ao ny fangatahana vola kely itehirizana, mba hividianana fitaovana, mitondra ny vola.
an-tsokosoko: Izy io dia amin'ny ankapobeny, dia mitaky vola an-tsokosoko amin'ny manam-pahefana any ivelany ary mametraka vola amin'ny banky any ivelany, izay manana tsiambaratelo lehibe na manefa kely fotsiny amin'ny famotsiam-bola.
Orinasa: Ireo orinasa miasa am-bola dia afaka mahazo vola avy amin'ny heloka bevava sy ara-dalàna miaraka, mitazona ny asan'izy ireo rehetra. Amin'ny fanatanterahana izany, tsy misy vidiny miovaova miaraka amin'ilay orinasa, ary sarotra ny mahita ny tsy fitovian'ny vidin'ny varotra.
Fivarotana vola miorina amin'ny varotra: Ny fidirana amin'ny alàlan'ny fidirana dia manambany fa tsy manaja hetsika vola tsy ara-dalàna.
Orinasa sy tokiny: Tsy milaza ny tena mombamomba ny tompona vola ny orinasa Shell sy ny fitokisana.
Capture Banky: Ny mpandika vola amin'ny fividianana vola dia mividy tsatokazo eo amin'ny andrim-panjakana miaro ny tsy fahampiana fandaniam-bola ary mamindra vola tsy mandinika.
trano filokana: Lasan'ny mpanondrana vola ao amin'ny casino, vola amin'ny birao, ary mitaky fandoavana. Avy eo dia nametraka izany ho toy ny taratasim-bola hitazomana azy ho fandresena amin'ny lalao izany.
Varotra sy hofa Fananana Mifaka: Ny vola tsy ara-dalàna dia azo ampiasaina amin'ny fividianana trano sy trano, avy eo amidy ka ny tombom-barotra avy amin'ny fivarotana dia mety hita any ivelany. Mamitaka ny vidin'ny trano ary nahazo tombony amin'ny mpivarotra ny mpivarotra satria nanaiky ny fifanekena nataonao.
Sazy Nahazo vola sy trano fandoavan-ketra
Vola maloto, heloka bevava, fandroahana hetra, vola amin'ny heloka bevava, fihetsika amin'ny tsiambaratelo, vola ho an'ny famatsiam-bola amin'ny heloka bevava. Fanasaziana noho ny fanodinkodinam-bola any Dubai na avy any UAE noho ny maha-zava-dehibe ny sehatra ity. Fahadisoana lehibe tokoa ny fanodinkodinana vola ary raha toa ka nisy na olona fantatrao dia niampanga ny fanangonam-bola, dia zava-dehibe ny hifandraisana amin'ny mpisolovava manam-pahaizana momba ny famotsiam-bola. Amin'ny fahazoana mpisolovava voaporofo amin'ny fandikan-dalàna fividianana vola, azonao atao ny manafoana ny sazy mety hitranga na hiady amin'ireto fiampangana ireto.
Ahoana no fomba handoavanao ny mpampindram-bola amin'ny mpampindram-bola anio
Ny raharaha momba ny fidiovana vola dia mety ho sarotra sy mandreraka. Raha miatrika fiampangana mafy amin'ny fandaniam-bola, dia tokony hifandray amin'ny fiarovana ara-dalàna UAE ianao, araka izay azo atao.
Ny lalàna federaly 9/2014 (izay manova ny lalàna federaly 4/2002 izay miady amin'ny ady amin'ny heloka bevava amin'ny fandotoana vola) (AKA ny Lalàna AML Vaovao) dia naterin'ny filankevitra nasionaly UAE tamin'ny volana Aprily 2013 ary natombony nanomboka tamin'ny volana Oktobra 2014.
Ny sazy amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny vola dia mavesatra kokoa amin'ny lalàna AML vaovao
Amin'ny ankapobeny, ny fanasaziana amin'ny famotsiam-bola dia henjana kokoa eo amin'ny Lalànan'ny AML Vaovao raha ampitahaina amin'ny Lalàn'ny AML teo aloha. Eo ambanin'ny Lalàn'ny AML Vaovao, ny tsy fahombiazanao mitatitra fifampiraharahana mampiahiahy dia mahasarika ny sazy eo anelanelan'ny 50,000 AED ary 300,000 AED na fampidirana am-ponja.
Ny fandefasana olona iray izay manontany momba ny fifanakalozana ara-drariny dia mahatratra hatramin'ny fampidirana am-ponja herintaona, na fandoa onitra 10,000 AED sy 100,000 AED.
Ny Lalàna AML vaovao dia miorina amin'ny Lalàna AML teo aloha. Ny lalàna AML Vaovao dia mifehy ny famatsiam-bola ataon'ny fikambanana tsy ara-dalàna na tsy nahazo anarana, famatsiam-bola ny fampihorohoroana na fanesorana ny vola azo avy amin'ny fanaovana famatsiam-bola.
Tena henjana ny lalàna momba ny fidiam-bola
Manararaotra teboka malemy ao amin'ny tambajotra ara-bola ny mpanao heloka bevava.